-यूनाइटेड इन्स्योरेन्समा लगानी गर्दा लगानीकर्तालाई कति फाइदा ? हेरौं आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण :: Artha Sansar News | Economic and Political News | Nepal online News
यूनाइटेड इन्स्योरेन्समा लगानी गर्दा लगानीकर्तालाई कति फाइदा ? हेरौं आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण
कम्पनीले २०७४/७५ आवको तेस्रोे त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार रू. ९ करोड १९ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा १ सय ३ प्रतिशतले बढी हो ।
कम्पनीले अघिल्लो आवको सोही अवधिमा रू. ४ करोड ५१ लाख नाफा कमाएको थियो । कम्पनीको आम्दानी ९० प्रतिशतले बढेकाले नाफा बढेको देखिन्छ ।
कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ३० करोड २४ लाख रहेको छ । बीमा कोषमा रू. २४ करोड १४ लाख जम्मा भएको छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ३२ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीले जेठ २७ गते २४ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ ।
जगेडा कोषको रकम रू. ३० लाख ८६ हजार ऋणात्म रहेको छ । बीमा समितिको निर्देशन अनुुसार चालू आवको अन्त्यसम्ममा रू. १ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्याउनु पर्ने अवस्थामा पूँजी वृद्धि योजना बीमा समितिमा स्वीकृतिको लागि पेश गरेको कम्पनीका अध्यक्ष उदय कृष्ण उपाध्यायले बताएका छन् ।
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू. ९५८
५२ हप्ताको उच्च व्यापार मूल्यः रू. १७१०
५२ हप्ताको न्यून व्यापार मूल्यः रू. ३४१
१८० दिनको भारित औसत मूल्यः रू. १०५८.२४
कम्पनीको महत्वपूर्ण अनुपात :
अध्यक्षः उदय कृष्ण उपाध्याय
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतः शेखर बराल
प्रधान कार्यालयः ट्रेड टावर, थापाथली, काठमाडौं
स्टक स्टिकरः युआइसी
कम्पनीको महत्वपूर्ण वित्तीय परिसूचकहरु (रू. हजारमा) :
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७३/७४ बीच तुलना गर्दा :
चुक्तापूँजीको तुलनामा खुद नाफा १४ दशमलव ९३ प्रतिशतबाट बढेर ३० दशमलव ४२ प्रतिशतमा पुगेको छ । कम्पनीको दीर्घकालिन लगानी तथा कर्जा रू. १३ करोड २६ लाख रहेको छ भने कम्पनीले महाविपत्ती जगेडा कोषमा रू. ६९ लाख १४ हजार छुट्याएको छ । कम्पनीको चालू सम्पत्ति रू. १ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख र चालू दायित्व रू. १ अर्ब १० करोड ४५ लाख रहेको छ ।
कम्पनीले चैत मसान्तसम्ममा रू. १५ करोड १७ लाख आम्दानी गर्दा रू. ५ करोड ९७ लाख खर्च भएको छ । सोही अवधिमा कम्पनीले रू. ३८ करोड ४९ लाख बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । भने जारी बीमालेखको सङ्ख्या ५१ हजार २ सय ६६ रहेको छ । नविकरण गरिएको बीमालेखको सङ्ख्या ८ हजार ५ सय ९३ रहेको छ ।
कम्पनीले १ हजार ४ सय ३६ जनालाई रू. २४ करोड ३८ लाख दाबी भुक्तानी गरेको छ भने १ हजार ८ सय ३२ जनालाई रू. ८० करोड ७९ लाख दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर आम्दानी रू. १७ दशमलव ९१, मूल्य आम्दानी अनुपात ४९ दशमलव ५३, प्रति शेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रू. ५ सय ४६ दशमलव ३६, तरलता अनुपात १ दशमलव ६३ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ६८ दशमलव ५९ रहेको छ । सोमवारको शेयर मूल्य नेटवर्थको साढे ५ गुणा बढी छ ।
प्रावधिक विश्लेषण :
खरीद चापः कम्पनीको सोमवार भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समयसम्ममा विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप साढे २ गुणा बढी रहेको छ । सो अवधिसम्म ५ हजार ६ सय १२ कित्ता शेयर खरीद गर्ने माग र २ हजार १ सय ७१ कित्ता विक्री गर्ने माग रहेको थियो ।
मैनबत्ती विश्लेषण :
१२ मार्च २०१८ ११ जुन २०१८
१२ मार्च २०१८ ११जुन २०१८
मैनबत्ती विश्लेषणः कम्पनीको ६१ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा ह्याम्मर आकृती बनेको छ । यस्तो आकृतीले कम्पनीको शेयर मूल्य बुलिसमा रिभर्स हुने सङ्केत गर्दछ । विश्वसनियता भने सामान्य रहेको छ ।
आरएसआईः कम्पनीको ६१ दिनको कारोबारमा आरएसआई न्यूट्रल जोन (३९ दशमलव ८२ स्केल) मा छ । यसले शेयर खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेकोे देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशनः कम्पनीको ६१ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन २० दशमलव ३१ विन्दुमा छ । उतारचढाव सामान्य रहेको छ ।
मुभिङ एभरेजः कम्पनीको ६१ दिनको कारोबारमा २६ दिने औषत मूल्यरेखालाई १४ दिने औषत मूल्यरेखाले माथि बाट काटेर तल आएको छ । २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखाभन्दा हालको मूल्य तल छ । सोमवारको मूल्य रू. ९ सय ५८ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भइ मूल्य महङ्गिएमा रू. १ हजारमा प्रतिरोध र मूल्य सस्तिएमा रू. ९ सय ३८ मा टेवा पाउन सक्छ ।